गल्ती सच्याउ प्रचण्ड |
प्रकाशित मिति :2016-08-04 18:36:02
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। दुईजना उपप्रधानमन्त्रीसहित छ जनामन्त्रीले आजै शपथ लिए। मन्त्रिमण्डलमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट विमलेन्द्र निधी र रमेश लेखकले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, गौरीशङ्कर चौधरी र दलजीत श्रीपालीले मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट चौधरी र श्रीपालीलाई पहिलो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। शसस्त्र युद्ध अघिदेखि नै पार्टीमा आवद्ध श्रीपाली रोल्पाका हुन भने युद्ध सुरु भएको २ वर्षपछि पार्टीमा लागेका चौधरी कैलालीका। संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै क्रान्तिकारी पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री दाहालले दलित र जनजातीलाई पहिलो मन्त्रिमण्डलमा लैजानु सकारात्मक हो।
१० वर्षे शसस्त्र युद्धमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको मुख्य मुद्दा मध्ये रहेको सर्वहारा, पछाडि पारिएका सिमान्तकृत समुदायलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य केन्द्रमा सहभागी गराउनु पनि हो। यहि सिद्धान्त अनुसार युद्धमा नेकपा माओवादीले आफ्ना लडाकुमा ती समुदायको सहभागिता र नेतृत्व दिदैँ आएको थियो। यहि नीति अनुसार माओवादी सेनामा ४० प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराएको उसको दावी रहँदै आएको छ। तर आफ्नो मुख्य मुद्दा मध्येका कतिपय सवाललाई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले चटक्कै छोडेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गठन भएको मन्त्रिमण्डललाई लिन सकिन्छ।
माओवादी युद्धमा निकै योगदान दिएका महिला माओवादी केन्द्रमा छन्। जसले आफ्ना छोराछोरीलाई पिठ्यूमा बोकेर युद्धको मोर्चामा लडेका थिए। तर ती महिलाको योगदानको मुल्याङ्कन क्रान्तिकारी पार्टीका नेताले यस पटक पनि गरेनन्। मन्त्रिमण्डल समावेशी होस भन्ने उनको चाहना थियो भने महिला किन छुटे ? ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटन् जरुरी ठानिएन वा उनले वेवास्ता गरेका हुन् ? यसको जवाफ समयले माग्नेछ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शसस्त्र युद्धताका उठाएका सवाल शान्तिप्रक्रियामा आएपछि छोड्दै गएको यो पहिलो उदाहरण होइन। उनले उठाएका बिषय देखेर नै महिलाले जनयुद्धमा साथ दिएका थिए। जनयुद्धले महिलाको राजनीतिक चेतनालाई ह्वात्तै बढाइदिएको कुरा धेरैले स्वीकार गर्दै आएका छन्। किनभने अति परम्परावादी सोच भएका संसदवादी दलले कहिल्यै महिलाका मुद्दालाई अग्रगामी रुपमा उठाएका थिएनन्। त्यसैले आम महिलाको भरोसा माओवादीमा थियो। तर, सत्तासञ्चालनको केन्द्रविन्दुमा आएपछि माओवादी केन्द्र पनि तिनै संसदवादी दलको कित्तामा सामेल भएकोमा आम महिला आश्चर्यमा छन्।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अझैपनि यो गल्ती सच्याउन सक्छन्। मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियामा महिलालाई सम्मानजनक स्थान दिएर यो गल्ती सच्याउन सकिन्छ। यस निम्ती उनी तयार हुनेछन् या छैनन् त्यो समयले बताउला।